AZURE Cloud Chain of Custody (CoC)
Digital forensics isascience that addresses the recovery and investigation of digital data to support criminal investigations or civil proceedings. Computer forensics isabranch of digital forensics that captures and analyzes data from computers, virtual machines (VMs), and digital storage media. Companies must guarantee that digital evidence they provide in response to legal requests demonstratesavalid Chain of Custody (CoC) throughout the evidence acquisition, preservation, and access process. To ensureavalid CoC, digital evidence storage must demonstrate adequate access control, data protection and integrity, monitoring and alerting, and logging and auditing REF: https://docs.microsoft.com/en-us/azure/architecture/example-scenario/forensics/?fbclid=IwAR3xt_bX21Vot9-1YvWFiP56CKfsEEhmJFYxh9DydcFtFwe0_V4YiguGNJE
Mobile Forensics Challence - SaaS Cloud Application - High Security - Various Mobile OS - Rooting - Chip Level Encryption - File System Encryption - Expensive Forensics Tools ဒါ့ကြောင့် အချို့သော အခက်အခဲတွေကို ကျော်ဖြတ်ဖို့ အတွက် PH Service ပညာရှင်တွေ အသုံးပြုတဲ့ Box - Application တွေကိုကျွမ်းကျင်စွာ ပေါင်းစပ်အသုံးပြုနိုင်ဖို့ပါ လိုအပ်လာနိုင်ပါသည်။ Example MRT Dongle. Mobile Forensics အတွက် Box အသုံးပြုနည်း Training ကို သင့်တော်တဲ့ ဆရာတွေဆီမှာ ပညာယူပြီး အတွေ့အကြုံရှာထားသင့်သည်။ Hardware အပိုင်းလဲပါပါသည်။ လုံခြုံ‌ရေးအဓိကထားတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေမှာ ပြသာနာ အတက်ဆုံးဖြစ်နေတာက BYOD လို့ခေါ်တဲ့ Bring Your Own Device ဖြစ်တဲ့ Mobile Phone ဖြစ်နေတာကို FB သတင်းတွေအရတွေ့နေရပါတယ်။ ကိုယ့်ထဲက ဝါသနာပါတဲ့သူ ၄ ယောက် ၅ ယောက်ကို သင်ခိုင်းပြီး အတွင်းထဲမှာပဲ ပြင်ရင် တစ်ချက်ခုတ် နှစ်ချက်ပြတ် အခြေအနေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။အခေါ်အ‌ဝေါ်တွေ အသုံးပြုနည်းတွေအတွက်ပါ ပိုကောင်းမွန်လာပါမည်။
English အသုံးအနှုံးတွေကို မြန်မာမှုပြုခြင်း မြန်မာနိုင်ငံမှာ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးလာဖို့ဆိုရင် ဥပဒေပိုင်းအရ အရေးပါတာတစ်ခုက Cyber (Electronic) Law Data Privacy အတွက်ဆိုရင် EU မှာ သုံးတဲ့ GDPR တို့ဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံအတွင်း ဘယ်လိုစီးပွားရေးပဲလာလုပ်လုပ် အခုခေတ်မှာ နည်းပညာနဲ့မပတ်သတ်ပဲလုပ်နိုင်တဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆိုတာရှားပါတယ်။ ရင်းနှီးမြှပ်နှံဖို့ ငွေသန်းပေါင်းများစွာရင်းတဲ့ လုပ်ငန်းတွေက မြေယာ အခွန် မြေယာ စတဲ့ ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုအတွက် သက်ဆိုင်တဲ့ ဥပဒေတွေအပြင် အထက်မှာပြောခဲ့တဲ့ ဥပဒေတွေကိုပါ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမပြုလုပ်ခင် စဉ်းစားတွက်ချက်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ နှစ်ဖက်လုံး အကျိုးရှိဖို့ Win Win Theory အရ တရုတ် Alibaba Cloud ဆိုရင်တောင် ပြည်ပကို ထိုးဖောက်ဖို့ Cloud Market တွေထဲမှာ ဈေးကွက်ရဖို့အတွက် Euproe မှာလိုက်နာရတဲ့ သတင်းအချက်အလက်ဆိုင်ရာ လုံခြုံရေး ဥပဒေအချို့ကို Service Level Agreement တွေမှာထည့်ထားပါတယ်။ "ဥပမာ EU GDPR အရ။ US Section ဘယ်လောက်အရ " မြန်မာမှာ တစ်ခုခက်တာက နည်းပညာအကုန်လုံးက အနောက်နိုင်ငံ Made တွေကြည့်ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာမှုပြုဖို့ တော်တော်ခက်ပါတယ်။ ဥပမာ
Mobile Forensics Challence - SaaS Cloud App...
English အသုံးအနှုံးတွေကို မြန်မာမှုပြုခြင်း ...